ရက်ပေါင်း ၉၀ - ငါ ၅ နှစ်ကျော်သစ္စာရှိရှိသုံးစွဲခဲ့သည့်အရာတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီးအကြီးအကျယ်မှေးမှိန်သွားသည်။ စဉ်းစားမနေပါနဲ့ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်က Porn
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ် ၅ နှစ်ကျော်သစ္စာရှိရှိအသုံးချခဲ့သည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီးအကြီးအကျယ်မှေးမှိန်သွားသည်။ ဒါကိုမစဉ်းစားနဲ့
သင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ pornfree မတိုင်မီကဘာလဲ
ငါတစ်နေ့လျှင်မျိုးစုံနာရီ porn လောင်သူကိုငါကဒီမှာနှင့် nofap အပေါ်မြင်ယောက်ျားတွေအချို့ကဲ့သို့သောအမာခံစှဲလမျးသူဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်မှန်မှန်တိုတောင်းသောအစည်းအဝေးများအတွက်လုပ်ကြမည်ဟုငါသည်ကိုယ်အသက်ကို၏ဖိစီးမှုကာလအတွင်းမှာတင်းမာမှုမှသက်သာရာရစေရန် PMO အပေါ်မှီခို။
အမှတ်ကျနော်မကြာခဏသုံးစွဲဖို့ခိုင်မာတဲ့ရမ္မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နေ့ 45 ငါပြန်သွားကြသည်ဆီသို့ရောက် လာ. , အနီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတဦးတည်းလက်၌ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းခဲ့နှင့်ငါ၏ဒစ်အခြားအတွက်ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနောင်တကြလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုလုပ်နေရာမှဝေးကိုကလစ်နှိပ်ပါ 1 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ (၅- နှစ်) ကြာအောင်သစ္စာရှိရှိအသုံးချပြီးငါ့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာ (အပြာ - သွေးဆောင်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်သည်) ဟာယုံကြည်မှုပျောက်ကွယ်သွားတာကိုကျွန်တော်အံ့သြမိသည်။
porn နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်အရှက်ကွဲခြင်းမရှိပဲနေထိုင်နေကြလှပတဲ့အရာဖြစ်၏။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မရဲ့ကိရိယာများပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသက်သေအထောက်အထားရှာဖွေမတွေ့ရှိမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုမကြောက်ဘဲနှင့်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၉၀ ပြည့်ပြီးပြီ၊ ထို့နောက်ငါစွဲလမ်းမထားဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြပြီးနောက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်သွားနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့ ၆၀ လောက်မှာဒီ subreddit ရဲ့ post ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်ဟာသာမန်အမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြခဲ့တယ်။ မင်းဘယ်တော့မှပြန်မလာသင့်ဘူး။ ၎င်းသည်မျိုချရန်ခဲယဉ်းသည့်ဆေးလုံးဖြစ်သော်လည်းသင်ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်နှင့်အမျှပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
ကြှနျတေျာ့ကိုနောက်ပစ်မှတ်စင်ကြယ်သော6လအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းငါ၏အခြုံငုံမျက်နှာပြင်အချိန်လျှော့ချရန်ခြေလှမ်းများယူပြီးနေပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Facebook မှာအဘို့အ Newsfeeds blocker, Youtube ကိုအကြံပြုချက် blocker, နာမည်ပျက်စာရင်း blacklist လုပ်ခြင်း reddit.com, Snapchat, တစ်နေ့လျှင် 21 နာရီဖုန်းအသုံးပြုမှုကန့်သတ်ထားတဲ့တစ်ဦးဟာ android app ကိုဖျက်ပစ်ခြင်းနှင့်ထို့ထက် ပို. စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားနေပါဝင်သည်။
LINK - ကျွန်ုပ်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကိုပထမဆုံးအကြိမ်နှိပ်ပါ ဤတွင်အမြန်အစီရင်ခံစာပါ။